कान्तिपुर कन्क्लेभ - कान्तिपुर समाचार
अमेरिकाविरुद्ध मक्सुद र इल्यासको शतक, ओमान ‘क्लिन स्विप’ नजिक
कप्तान जिसान मक्सुद र उपकप्तान अकिब इल्यासको शतकमा ओमानले क्रिकेट विश्वकप लिग २ को खेलमा अमेरिकालाई २ सय ७७ रनको विशाल चुनौती तेर्स्याएको छ । अमेरिकाले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको ओमानले त्रिवि...
सरकारलाई घेराउ गरेको छैन : दाहाल
मानव अधिकार आयोगकै अधिकार संकटमा : अन्सारी
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार नै संकटमा रहेको आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताएकी छन् । कान्तिपुर कनक्लेभमा बोल्दै अन्सारीले विभिन्न कारणले मानव अधिकारको अधिकार नै संकटमा परेको बताएकी हुन् ।
एमसीसीबारे गगन थापा संसदमै बोल्ने, परराष्ट्रमन्त्रीले भने- 'आर्थिक सहयोगलाई राजनीतिक रंग नदिऊँ'
नेपाल सरकार र अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौताबारे कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले संसदमा नै बोल्ने बताएका छन् । कान्तिपुर कनक्लेभको शनिबारको 'नेपालः अगाडि कि पछाडि' सत्रमा थापाले उक्त विषयमा संसदमा नै बोल्ने बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् तथा केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले प्रतिपक्षी कांग्रेसले गरिरहेका कमजोरीको मूल्य जनताले चुकाउन नहुने बताएका छन् ।
पितृसत्तात्मक संस्थागत सामाजिक संरचनाले गर्दा नेपालको ‘मी टु’ अभियान तथा कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारविरुद्धको अभियान अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
'फर्केर के पाइन्छ ? वा नेपाल फर्केर मैले के गर्न सक्छु ?', विदेशमा रहेका धेरै नेपालीले बारम्बार सोध्ने यही प्रश्‍नबारे कान्तिपुर कनक्लेभको दोस्रो दिनको 'कनेक्टिङ ग्‍लोबल नेपालिज' सत्रमा चर्चा भयो ।
शुक्रबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको दोस्रो कान्तिपुर कनक्लेभमा आज पनि विभिन्न सत्रहरुमा छलफल चलिरहेका छन् ।
कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण तस्बिरमा
तस्बिर : अंगद ढकालतस्बिर : इलिट जोशीतस्बिर : केशव थापा
कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । काठमाडौंको होटल हयातमा सुरु भएको दोस्रो संस्करण दुई दिनसम्म शुक्रबार र शनिबार गरेर दुई दिन हुने छ । कन्क्लेभको दोस्रो संस्करणको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चारजना वक्ताले विद्वत प्रवचन दिएका छन्। केही तस्बिरहरु :
ठूला नदीहरुमा छिट्टै राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज चल्छन् : प्रधानमन्‍त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल छिट्टै जलमार्गबाट विश्‍वसँग जोडिने बताएका छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो संस्करणमा विद्वत प्रवचन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भए पनि छिट्टै विश्‍वसँग जोडिने बताएका हुन् ।
कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण सुरु
कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । काठमाडौंको होटल हयातमा सुरु भएको दोस्रो संस्करण दुई दिनसम्म शुक्रबार र शनिबार गरेर दुई दिन हुने छ ।